IATA - Africa Aviation: Safety, Connectivity, Blocked Funds, Human Capital
Home » Akụkọ ụgbọ elu » IATA - Africa Aviation: Nchedo, Njikọta, Egochi egbochi, Isi Obodo mmadụ
IATA - Africa Aviation: Nchedo, Njikọta, Egochi egbochi, Isi Obodo mmadụ
ATAtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) gosipụtara mkpa ise dị mkpa nke a ga-edozi maka ụgbọelu iji nyefee oke uru akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na Africa. Ndị a bụ:
“Africa bu mpaghara nwere ikuku ikuku kacha elu. Ihe karịrị otu ijeri mmadụ agbasaala na kọntinent a sara mbara. E debere ụgbọelu n'ụzọ pụrụ iche iji jikọta ohere akụ na ụba nke Africa n'ime na gafere. Na ime nke a, ụgbọ elu na-agbasa ọganihu ma gbanwee ndụ ndị mmadụ maka nke ọma. Nke ahụ dị mkpa maka Africa. Ugbo elu nwere ike inyere aka n’inwe ebum n’obi UN Sustainable Development, tinyere mkpochapu ịda ogbenye ma melite ma ahụike na mmuta, , Africa, gaa na 49th African Airline's Association Annual (AFRAA) General Assembly na Kigali, Rwanda.
“Africa nwekwara nnukwu nsogbu ma ọtụtụ ụgbọ elu na-agbasi mbọ ike ịkwụsị. Na, n'ozuzu ya, ụlọ ọrụ ụgbọelu nke Africa ga-efufu $ 1.50 maka onye ọ bụla njem ọ na-ebu. Ndi gọọmentị kwesiri ịmara na Africa bụ ebe dị oke ọnụ maka ụgbọ elu. Estụ isi, mmanụ na akụrụngwa akụrụngwa dị elu karịa nkezi ụwa. Na mgbakwunye, enweghị nchekwa zuru oke, ịghara ịgbaso ụkpụrụ ụwa niile, yana nkwekọrịta ọrụ ikuku na-egbochi mmadụ itinyekwu ibu na-egbochi ụzọ akụnụba ụgbọelu na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ”ka de Juniac kwuru.
Nchebe n'Africa abawanyela. Na 2016 enweghi ihe ọghọm nke njem ma ọ bụ ọghọm ụgbọelu jet na Sub-Sahara Africa. Mgbe etinyere arụmọrụ turbo-prop, ihe odide Sub-Sahara Africa dekọtara ihe ọghọm 2.3 kwa nde ụgbọ elu megide nkezi ụwa niile nke ihe mberede 1.6 kwa nde ụgbọ elu.
“Nchebe n'Africa abawanyela, mana enwere oghere iji mechie. Standardskpụrụ ụwa dịka IATA Operational Safety Audit (IOSA) bụ isi ihe. Ọnụ ọgụgụ arụmọrụ maka IOSA na-egosi na ọnụọgụ ihe ọghọm nke ndị na-ebu akwụkwọ aha iri atọ na atọ nke IOSA na Sub-Sahara Africa bụ ọkara nke ndị na-ebu ọ bụghị na ndekọ. Ọ bụ ya mere m ji agba ndị gọọmentị Africa ume ka ha jiri IOSA na nlekọta nchekwa ha, ”ka de Juniac kwuru.
De Juniac kpọkwara maka nlekọta nchekwa nchekwa gọọmentị ka mma, na-ekwu na ọ bụ naanị steeti iri abụọ na abụọ nke Africa erutela ma ọ bụ karịa karịa mmejuputa 22% nke ụkpụrụ International Civil Aviation Organisation (ICAO) na omume akwadoro (SARPs) maka nlekọta nchekwa. “Nkwupụta Abuja ahụ kwadoro steeti iji nweta nchekwa nchekwa ụwa n’Africa. ICAO SARP bụ ụkpụrụ dị egwu zuru ụwa ọnụ. Ndị gọọmentị agaghị ada n’azụ na-ebugharị ebumnuche ndị dị mkpa dị na Abuja dịka ntọala nke ndị otu nchekwa Runway, ”ka de Juniac kwuru.
IATA gwara steeti 22 ndị bịanyere aka n'akwụkwọ maka mkpebi Yamoussoukro (nke mepee ahịa ụgbọ elu intra-Africa) ka ha gbasoro nkwa ha. Ọ gakwara n'ihu gwa ndị gọọmentị ka ha bulie atụmatụ Ebumnuche Transportgbọ njem Afrịka nke Otu Afrịka
“Ọganihu nke akụ na ụba Afrịka na-egbochi uto akụ na ụba Africa. Ohere di na-efunahụ naanị n'ihi na njikọ ụgbọ elu dị mfe adịghị. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịgbanwe ihe gara aga, anyị ekwesịghị ịhapụ ọdịnihu dị mma, ”ka de Juniac kwuru.
Experiencegbọ elu dị iche iche na-enwe nsogbu nloghachi ego ha nwetara na Africa site na ọrụ ha na Angola, Algeria, Eritrea, Ethiopia, Libya, Mozambique, Nigeria, Sudan na Zimbabwe. “Achọrọ azịza bara uru ka ụgbọ elu wee nwee ike ịdabere na ntụkwasị obi ịghaghachi ego ha nwetara. Ọ bụ ọnọdụ maka ịzụ ahịa na inye njikọta, ”ka de Juniac kwuru.
Njikwa ụgbọ okporo ígwè
IATA kpọkuru ndị gọọmentị Africa ka ha gbochie iwezigharị njikwa ụgbọ elu ihu na mkpebi mkpebi Rwanda ịhapụ Dar-Es-Salamm Flight Information Region (FIR) na South Sudan ịhapụ Khartoum FIR. “ASENCA, COMESA na atụmatụ ikuku elu ikuku EAC dị elu na-eme ka arụmọrụ nke ikuku ụgbọelu na-arụ ọrụ nke ọma site na-arụkọ ọrụ ọnụ. A na m arịọ Rwanda na South Sudan ka ha chegharịa mkpebi ha, "de Juniac kwuru.
IATA gbara ndị ụlọ ọrụ ume ka ha gbaa izu na mkpebi itinye ego njikwa ụgbọelu. Nke ahụ ga - eme ka itinye aka na mkpa ọrụ ụgbọ elu ma zere itinye ego na itinye ego. “Ulo oru mbo aghaghi igbalite nchedo na oru oma site na njirimara onye oru. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ha bụ ndị ọzọ na-eri ibu arọ, ”kwuru de Juniac. Usoro ICAO Collaborative Decision Making (CDM) bụ ezigbo ntụzi maka ndụmọdụ ndị a.